Run – Tompondaka nasionaly: miandrandra fandresena i Tony | NewsMada
Roa andro mialohan’ny dingana farany amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, Run, efa hita soritra sahady ireo mpanamory manana isa ambony ary mety hibata ny amboara amin’ity taom-pilalaovana ity.
Ho an’ny sokajy “Runs”, manana tombony hiatrehany ity dingana faha-6 farany ity Razafintsalama Tony. Izy izay efa velom-panantenana tanteraka hibata ny amboara amin’ity taona ity. Isa 141 amin’izao no efa eo am-pelantanan’i Tony ary ambony izany, mihoatra amin’ireo mpanamory hafa, satria ahitana elanelanelana 71 be izao ny isa eo aminy sy ny laharana faharoa, Razafimbelo Andrinirina. Ity farany izay manana isa 70,6. Miankina amin’ny fivadihan’ny lalao amin’io alahady io anefa ny vokatra ho an’ny mpifaninana tsirairay. Laharana fahatelo amin’ny sokajy “Runs” Randriamanantsoa Andry, manana isa 55,6.
Misongadina kosa Rafanomezantsoa Jean de Dieu, ilay mpanamory fantatry ny maro amin’ny anaram-bositra hoe Vazaha, eo amin’ny sokajy “Prorun”, raha araka tambatr’isa azony nandritra izay dingana 5 efa vita izay. Manana isa 112 izy ary mampitombo ny herijika hiatrehany ny dingana faha-6 ity izany. Vazaha izay nisalotra ny anaram-boninahitra tompondakan’i Madagasikara “Pro Run” tamin’ny taon-dasa, raha hiverenana ny valin-dalao. Tsy lavitra azy fa mitàna ny laharana faharoa amin’ny isa 103, Randriarimalala Harijaona na i John Elite, mitondra ny fiara Smart Dragsters. Hafana vay tokoa ny fifanandrinana eto amin’ireto mpanamory kalaza mirahalahy ireto ary andrasana fatratra tokoa izay hibata ny amboara amin’izy ireo. Mamarana ny telo voalohany eo amin’ny sokajy “Pro Run” amin’ny filaharana ankapobeny, i Boarilaza Herizo, manana isa 66,4.
Tsahivina fa hiatrika ny dingana farany amin’ny fiadiana ny tompondan’i Madagasikara, amin’ny Run ireo mpanamory ireo, ny alahady 2 desambra izao. Izany dia hotontosaina eny Batac Arivonimamo.
Ireo 5 voalohany amin’ny “Run”:
1-Razafintsalama Tony (Super 5): 141
2-Razafimbelo Andrinirina (Golf VR6): 70,6
3-Randriamanantsoa Andry (VW MK1): 55,6
4-Rahary Tianina (Clio): 47,2
5-Rakotoarivelo Didi (Golf II): 41
Ireo 5 voalohany “Pro Run”:
1-Rafanomezantsoa Jean de Dieu (Subaru Impreza): 112
2-Randriarimalala Harijaona (Smart Dragsters) : 103
3-Boarilaza Herizo (Mustang) : 66,4
4-Razafindrabe Azuno (Golf VRT): 39,6
5-Mamodaly Nouroudine (Peugeot 206): 32,2